JONO AN-DRANOMAMY : Hisokatra amin’ny 15 febroary raha nikatona ny 15 desambra 2018 teo
Ny 15 febroary izao vao tokony hisokatra ny jono an-dranomamy izay nikatona ny 15 desambra 2018 teo. 4 février 2019
Mbola maro hatrany anefa ireo mitrandraka sy mivarotra hazan-dranomamy. Mampahatsiaro ny ao amin’ny sampan-draharahan’ny jono fa mikatona ny jono an-dranomamy ka tsy tokony hisy hivarotra mihitsy eny an-tsena. Mampitandrina koa izy ireo fa ho tonga hanasazy raha mbola misy tratra. Aoka isika hifanaja, hoy izy fa izay tratra dia hogiazana avy hatrany.
Marihina moa fa amin’ireo farihy sy renirano any amin’iny distrikan’i Mitsinjo sy Soalala iny ary Marovoay sy Ambato Boeny iny no tena fakan’olona haza an-dranomamy eto amin’ny Faritra Boeny. Amin’ny fanakatonana ny fotoam-panjonoana dia mametraka zana-trondro ao anatin’ireo farihy ireo ny sampan-draharaham-paritry ny jono. Izany dia mba hampitombo taranaka azy ireo satria noho ny fitrandrahana tsy am-piheverana dia efa maro ireo karazana trondro ao anatin’ny farihin’i Mitsinjo sy Soalala iny no lany taranaka tanteraka.